प्याराग्लाइडिङ पर्यटक बढे | eAdarsha.com
प्याराग्लाइडिङ पर्यटक बढे
१. यतिखेर फेवातालमाथि आकाशमा सयौं प्याराग्लाइडिङ उडिरहेको देखिन्छ । चरा झैं कावा खाँदै आकाशमा उड्दाको आनन्द छुट्टै छ । प्याराग्लाइडिङ उडेको हेर्न पनि उत्तिकै रमाइलो हुन्छ । कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्र अन्यन्त्र सुस्ताई रहेको वेला प्याराग्लाइडिङमा भने पर्यटक बढेको देखिएको छ । यसको प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीलाई उत्साह पनि पुगेको छ ।
२. अन्य क्षेत्र सुस्ताउँदा प्याराग्लाइडिङमा त्यसै पर्यटक बढेको होइन । यसमा पोखराका व्यवसायीहरुले खेलेको रणनीति महत्वपूर्ण रहेको मानिएको छ । प्याराग्लाइडिङ शुल्कमा भारी छुटपछि पर्यटक बढेको हो । यसअघि ७÷८ हजारसम्म शुल्क लिने गरिएकोमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन थालिएपछि पर्यटक बढ्न थालेका छन् । अहिले ३ हजार देखि ३५ सय सम्म शुल्क लिने गरिएको छ ।
३. शुल्क नै घटेपछि प्याराग्लाइडिङ गर्ने बढे । पहिले यसमा विदेशीहरु बढी हुन्थे । अहिले आन्तरिक पर्यटक नै धेरै देखिन्छ । पर्यटक बढे पछि प्याराग्लाइडिङ चालकहरुलाई भ्याई नभ्याई छ । देशका विभिन्न ठाउँँबाट पर्यटक आएका छन् । प्याराग्लाइडिङ अन्यत्र पनि छ । तर पोखराको प्याराग्लाइडिङ प्रति धेरैको आकर्षण छ ।
४. हिमाल, पहाड, तालतलैया, नदिनाला सहितको पोखराको मनोरम दृष्याले सबैको मन लोभ्याउँछ । विश्वकै भ्रमण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण स्थानहरुमा रहेको पोखरामा जो कोहीले पनि इच्छा राखेकै हुन्छन् । अहिले कोरोना महामारीले गर्दा धेरैलाई कुण्ठित बनाएको छ । भ्रमणको रहर हुँदा हुँदै पनि फुकेर हिड्न पाएको अवस्था छैन । यस अवस्थामा प्याराग्लाइडिङमा देखिएको बृद्धिलाई सन्तोषकै रुपमा मान्नु पर्दछ ।
५. कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएपछि उद्योग व्यवसायहरु बन्द भए । सबैभन्दा बढी पर्यटक क्षेत्र प्रभावित बन्यो । अहिले धेरै सँग खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो स्थितिलाई आत्मसात गरेर प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीले भारी छुटको घोषणा गरेर पर्यटकलाई जुन आकर्षण गर्ने कार्य गरे त्यो स¥हानीय मान्नुपर्दछ । प्याराग्लाइडिङ जस्तै अन्य क्षेत्रले पनि यस्तै सुविधाका घोषणा गरी न्यूनतम खर्चबाट भएपनि व्यवसाय सुचारु गर्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले सिङ्गो पर्यटन क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन सक्दछ ।
कोभिडको खोप सुरु
सम्पादक माघ १४, २०७७
आज नेपाल र नेपालीका लागि विशेष महत्वको दिन हो । देशवासीहरु कोभिड–१९ महामारीबाट बच्ने कुनै औषधी र उपचार विधि नपाएर…
सम्पादक माघ १५, २०७७